Inkampani yaseNitel yasekwa ngo-2010, ngumnikezeli obalaseleyo wokuqalisa ukunciphisa izixhobo kunye nezixhobo zayo. Okwangoku, ayisiyiyo kuphela iqela elikhokelayo lenkampani elinendlela yokucinga kwangaphambili, kodwa likwanalo neqela labasebenzi abanobuchule kunye neqela labasebenzi elisokolayo ngokudibeneyo. Ukongeza, inkampani inezixhobo zokuqala ezikwimveliso kunye nesixhobo esifanelekileyo sokutshekisha. Inkampani iqhuba i-ISO / TS 16949-2009 yeNkqubo yoMgangatho weHlabathi ngokungqongqo.our kufuneka iye kumboniso weShanghai Frankfurt minyaka le, ithembisa ukuthembela kunye nenkxaso yamaTshayina kunye foreign abathengi. siyathemba ukuba iNitel izakubangcono kwixesha elizayo.
UNitai uzama ukuba yinkokeli kwiindawo zentengiso yemoto enzima. Ukuthembela kubuchwephesha bethu, ukuthembela, ubulumko, ukusebenza nzima kunye nokuzinikela ukuze uqhubele phambili kwaye uvelise iimveliso ezikumgangatho ophezulu, inkampani inyanzelise kwindlela ekumgangatho ophezulu, ulawulo olungqongqo, ukucokisa, kunye nokuyila. Iminyaka emininzi, thina Iimveliso zethu zamkelwe kakuhle ngabathengi. Ukuqhubeka nokuphucula umgangatho kaNitai, sihlala siphucula ukusebenza kunye neqonga lolawulo lwenkqubo yeshishini ngoqeqesho kunye nokufunda. Inkampani iphucula iinkqubo zokusebenza kwangaphakathi kunye nolawulo olusezantsi ngokusekwe kwimeko eyiyo, kwaye ngokuthe ngcembe iseka inkqubo yokusebenza kunye nolawulo kuqeqesho lweqela kunye nophuhliso lweshishini, olunokuthi lwenze ngokufanelekileyo ucwangciso, uhlaziyo lwemveliso kunye nokudityaniswa kwezixhobo. Ifilosofi yethu kukuba ukwaneliseka kwabathengi kukufuna kwethu ngonaphakade. Siyaqhubeka ukukhuthaza iinkonzo ezigqibeleleyo, iinkonzo ezinenkathalo nezifezekileyo kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso afanelekileyo, intsebenziswano yexesha elide kunye nokuxhamla.